Shiinaha warshad dhego yare qaboojiyay Soo saar iyo Warshad | Nongchuanggang
Toonta si dhaqso leh u barafaysan ayaa loo ilaaliyaa waa mid ka mid ah waxsoosaarka qotada dheer ee toonta. Iyada oo toonta ay tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee cayriin, waxaa si ballaaran u isticmaalay bulshada caalamka. Xaaladaha caadiga ah, soosaarka noocyadan toonta ee noocan ahi waxay u baahan yihiin kormeer alaab ceeriin ah, qoynin, diirid iyo in ka badan 10 tallaabo iyo habab.
Baadhitaanka alaabta ceeriin: alaabta ceeriin waxaa loo baahan yahay marka hore qaab dhammaystiran, ma qurmay, ma dhaawacna, cudurro iyo cayayaan ma leh, toon toon ah oo toon ah iyo waxyaabo kale oo cillad leh ama wasakh ah.
Qulqulka: Ku qoy toonta oo dhan biyo nadiif ah illaa 15 ~ 30 daqiiqo si aad ugu fududaato fiiqitaanka. Fiiqida: toonta qooyay ku xoq diirka toonta mar. Fiiqidda labaad: kuwa aan ka xoqin xinjiraha toonta ee ka soo baxa mashiinka xoqidda, toontu waxay u baahan tahay in gacanta laga saaro si loo hubiyo in maqaarka toonta la nadiifiyo.
Qiimeynta: Tirada toonta toonta ayaa la hubiyaa oo loo qiimeeyaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha. Baadhitaannada: kormeerka shaqaalaha aqoon isweydaarsiga, ka takhalusidda cudurrada iyo cayayaanka cayayaanka, midabka xun, dhaawaca, nabarrada qalalan, baraha cilladda, iyo alaabada iyo cilladaha kale ee cilladaysan.
Jeermiska jeermiska: aqbalida bariiska toonta ee u qalma 100 mg / litir oo ah sodium hypochlorite solution immersion 15 daqiiqo, lagu gaaro bakteeriyada cudurada wadata si loo dilo ujeedada. Nadiifinta: Ku biyo raaci biyo socda si aad uga saarto xalka hadhaaga sodium hypochlorite. Fuuqbax: ka saar qoyaanka dusha sare ee bariiska toonta mashiinka qalajinta.
Qabow deg deg ah: bariiska toonta ee u qalma ka dib taxanaha daaweynta ee kor ku xusan ku rid qaboojiyaha nooca suunka saafiga ah. Heerkulka xilliga wax soo saarku wuu ka hooseeyaa -25℃, iyo heerkulka bartamaha alaabta ka hooseeyo -18℃ ka dib markii ay dhaqso u qaboojiso.
Xirxirida: Xirxirida waa in lagu sameeyaa qol gaar ah oo nadiif ah oo lagu xirayo nadaafada, heerkulka booskiisana waxaa looga baahan yahay in lagu xakameeyo 0 ~ 10 gudahood.℃.
Ogaanshaha birta: alaabooyinka oo dhami waa inay ka gudbaan qalabka baarista biraha, aqoon-is-weydaarsiga u go'ay inay shaqeeyaan, shaqaalaha ilaaliya tayada shaqada si ay u sameeyaan baaritaanka xasaasiga ah saacad kasta.
Qaboojiye: badeecadaha baakadeysan waa in lagu rido kaydinta waqtiga. Si loo hubiyo tayada wax soo saarka, heerkulka kaydinta waa in lagu hayaa -20±2℃ iyo heerkulka dhexe ee alaabooyinka dhammaaday ee ka hooseeya -18℃.
Nooca Processing-ka Diiray
Habka Qaboojinta IQF
Qaab Qaab Gaar ah
Magaca badeecada Xilliga cusub ee toonta la qaboojiyey
Waxyaabaha 100% Toonta Cusub
Dhadhan Dhadhanka caadiga ah
Cabir 150-200 / 200-280 / 280-380pcs / kg
NOLOSHA SHELF 24 Bilood Kahor -18 Degree
Xirxirida 10 Kg / CTN
MOQ 12 tan
Shuruudaha Qiimaha FOB CIF CFR
Rarida Degdeg ah
Hore: Toon cusub
Xiga: Toonta Cusub